आजको राशिफल- तपाइको भाग्यदिन हेर्नुहोस् —
अस्ट्रेलियाबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ? ट्रान्जिट नबुझ्दा दुःख पाउनुहोला ! जानिराखौ !
म्यासेज गर्ने यी ५ तरिकाबाट थाहा हुन्छ , तपाई उसको लागि स्पेसल मान्छे हो कि साथीमात्र हो भन्नेकुरा !जानिराखौ !
अस्ट्रेलियामा सयौँलाई रोजगारी मिल्ने सबभन्दा ठुलो गाँजाको फ्याक्ट्री खुल्दै...
"रातो र चन्द्र सूर्य" भन्दै यसरी नाचे पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र र हिमानी शाह...(भिडियो र तस्बिर सहित)
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ पुगे चक्लेटी नायक आर्यन (फोटो फिचर)
आजको राशिफल- तपाइको भाग्यदिन हेर्नुहोस्
2019-09-07 2019-09-07 admin
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – समाजमा लोकप्रिर्य काम गरि दाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ भने राज्यको तर्फबाट सम्मानित हुँने योग रहेकोछ । राजनिति तथा समाजसेवामा अरुको मन जित्दै तथा अरुलाई प्रतिष्पर्धामा हराउँदै पद पाउँने प्रसस्त सम्भावना रहेकोछ । धर्म कर्ममा मन जानेछ भने धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा हुनेछ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले भौतिक सम्पतिको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) – बिहानको समय राम्रो रहेकोले भौतिक सम्पति तथा विलाशी बस्तुको व्यापार गरि मनग्गे धन सम्पति जोड्न सकिनेछ । लामो दुरिको व्यापारीक यात्रा हुनेछ । पढाई लेखाईमा एक कदम अगाडि बढि सफलता हात पार्न सकिनेछ । मध्यान्हबाट सामान्य बिवादले अपठरो परिस्थितिमा लैजान सक्छ ध्यान दिनुहोला । पुराना समस्या बल्झने तथा नया समस्याहरु थपिनेछन् । अध्ययन तथा अनुशन्धानमा समय खर्चिए पनि भनेजस्तो उपलब्धि नहुदा तनाब बढ्नेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) –माया प्रेममा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै रमाउँन सकिनेछ भने घर परिवार सबैसँग सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । नोकरिमा पदोन्नतीको गतिलो योग रहेकोछ । पढाई लेखाईमा उत्कृष्ट अंकले सहभागिहरुलाई हराउन सकिनेछ । माया प्रेमको गाठो कसिलो हुनेछ भने मिल्ने साथीका साथ स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) –तपाईको वरिपरि भएका प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ भने बिवादित बिषयहरुको निर्णय तपाईकै पक्षमा आउँनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा थोरै समय दिदा पनि राम्रो नतिजा हात लाग्ने हुँदा आफन्त तथा गुरुवर्गहरुबाट थप हौसला प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा सदाभन्दा आम्दानि बढिनै हुनेछ भने माया प्रेमको गाठो कसिलो भएर जानेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) –बिहानको समय मध्ययम रहेकोले घरेलु तथा अन्य समस्याले सताउनेछ । आफन्त तथा घर भित्रकै मानिस सँग मनमुटाब सिर्जना हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले सवारि साधन तथा भौतिक सम्पति लाभ हुँने तथा चिठ्ठा पर्ने योग रहेकोछ । व्यावसायबाट भनेजस्तो नाफा कमाउँन सकिने हुँनाले अन्य क्षेत्रमा पनि रुपैया पैसा लगानि गर्न आट आउँनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) –बिहानको समय राम्रो रहेकोले लामो तथा छोटो दुरिको रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ । दाजुभाई तथा आफन्तबाट भनेजस्तो सहयोग पाईने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । मध्यान्हबाट राजनितिमा जनताको काम गर्न सक्दा पद प्राप्तिको योगलाई नकार्न सकिदैन । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकिकरण गरि मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । सवारि साधनको प्रयोग तथा पैदल यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्ययम रहेकोछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) –न्यायलयबाट हुँने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । बादबिवाद,प्रतिश्पर्धा तथा मुद्दा मामिलामा तपाईकै जित निश्चित छ । जनसम्पर्क बढ्ने तथा दाजुभाई,छिमेकिबाट भनेजस्तो सहयोग पाईने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछ । आफुभन्दा बिशिष्ट ब्याक्तिसँगको भेटघाटले नयाँ योजना बनाउँन सहयोग पुग्नेछ । बिहानको समयमा मिष्टान भोजनका साथ परिवारसँग रमाउन सकिनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) –थोरै समय र सानो लगानि गरी शुरु गरिने व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा कुटुम्ब सँग भेटि नया कामको योजना बुन्न सकिनेछ । पारिवारिक सभा समारोहमा सहभागि भई स्वादिष्ट भोजनका साथ रम्न सकिनेछ । प्रणय सम्बन्धमा सुधार आउनुको साथै नया ठाउबाट प्रेम प्रस्ताब आउने प्रवल सम्भावना रहेकोछ । राजनिति तथा समाजसेवामा समय खर्चिनेहरुले अलि बढि मेहनेत गरे जनताको मन जित्न सकिनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) –नयाँ नयाँ प्रेम प्रस्ताव आउँने तथा माया प्रेममा आफ्नो मायालुलाई आफ्नै आखाँको वरिपरि देख्न पाउँदा मन खुसि हुनेछ । राजनितिक सभा समारोहमा जमघट भई स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ भने समाजमा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठा बडेर जानेछ । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा ठुलो प्रगति गर्न सकिनेछ भने सबैतिरबाट तपाईको काममा सहयोगको हुनेछ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले काम गर्र्दा ध्यान दिनुहोला ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) –बिहानको समय राम्रो रहेकोले पढाई लेखाईमा चाहेको सफलता हात लाग्ने हुँनाले सफलताका सिडिहरुरु चुम्न सकिनेछ । चाहेका बस्तु तथा ईच्छित कामनाहरु पुरा हुने समय रहेकोछ । मध्यान्हबाट खर्च भावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले स्वास्थ्यमा समस्या बढाउनेछ भने औषधि उपाचार खर्च बढेर जानेछ भने खानपानमा ध्यान नदिदा पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) –आर्थिक सवालमा उठ्ने प्रश्नहरुको हल हुनेछ । आम्दानिका नयाँ नयाँ बाटाहरु फेला पर्नेछन् भने सानो तिनो प्रयत्नले ठुलै काम सम्पादन हुनेछ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोगबाट भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ । कृषि,पशुपालन,तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थजन्य उद्योगमा लगानि गर्दा भनेजस्तो नाँफा कमाउँन सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा अरुलाई उछिनेर अगाडि बढ्ने समय रहेको छ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) –कामकै सन्द्रर्भमा समाजका बिशिष्ट व्याक्तिहरु सँग भेटघाट हुनेछ । पढाई लेखाईमा सोचेजस्तो नतिजा हात लाग्ने हुँनाले घर परिवार तथा आफन्तहरु खुसि हुनेछन् । व्यापार व्यावसायमा समय दिनेहरुले मनग्गे आम्दानि गर्न सक्नेछन् भने नयाँ ठाउँमा लगानि गर्ने बाताबरण बनेर जानेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको साथ रहने हुँनाले काम गर्न सहज हुनेछ । माया प्रेममा रमाउँने चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
राशिफलले जे जस्तो भने पनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुहोला । धन्यवाद । तपाइको दिन शुभ रहोस् !!!
अमेरिका मिजौरी दुर्घ’टनाः शोक मनाउनै पाएनन् परिवारले ! घरमा बुढा आमाबुबालाइ सुनाइएको छैन खबर
अस्ट्रेलियामा धोबी चराको आतं’क, धेरै उजुरी परेपछी मारि’यो धोबी चरा ।
2019-11-14 admin 0
५ राशिका यि ब्यक्तीहरू जस्ले कहिले हार मान्दैनन् । बदल्छन् आफ्नो भाग्य…
बुलबुल ।शास्त्रका अनुसार सबै गरी राशिहरू १२ वटा मात्र हुन्छन् । विश्वमा रहेका सम्पूर्ण मानिसहरूको राशि...
2019-11-13 admin 0
धोकेबाज गर्लफ्रेन्डको ५ यी बानी र सङ्केतहरू । थाहापाँउनुहोस्
काठमाडौँ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल एकदमै एक्टिभ छ । सामाजिक सञ्जाल मा झुम्ने युवायुवतीहरूको कमी...
2019-11-12 admin 0
शास्त्रका अनुसार विवाह गरिसकेपछि यी राशि हुनेहरूको चम्कन्छ भाग्य (हेर्नुहोस्)
शास्त्रका अनुसार प्राय मानिसहरूको जीवन विवाह हुनुभन्दा पहिले र पछि धेरै फरक पर्दछ । कुनै मानिसहरू...
2019-11-18 admin 0
“रातो र चन्द्र सूर्य” भन्दै यसरी नाचे पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र र हिमानी शाह…(भिडियो र तस्बिर सहित)
काठमाडौँ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शनिवार ठमेलको नाइट क्लब पुगेर सबैलाई सर्प्राइज दिएका छन् । शाह ठमेलको चर्चित क्लब ‘लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स'(एलओडी) पुगेका हुन् । प्रायः युवाहरू मात्र पुग्ने एलओडीमा शाह क्लब पुग्दा त्यहाँ उपस्थित युवाहरू आश्चर्यचकित बनेका थिए । अझ त्यस माथि रातो र चन्द्र...
2019-11-17 admin 0
सचिन तेन्दुलकरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरे भेट
काठमाडौं मंसिर १,। भारतका चर्चित क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर नेपाल भ्रमणमा आएका बेला प्रधानमन्त्री के पी शर्मा...
2019-11-16 admin 0
सीमा रक्षाका लागि राज्यले जहाँ खटाए पनि जान्छौँः नेपाली सेना
फाइल फोटो/ रुपन्देही । नेपाली सेनाले नागरिकसँगको अन्तरक्रियालाई अघि बढाएको छ। सेना–जनता बिचको दुरी टाढा भएको...
नायिका रेखा थापाले जनकपुरबाट सुरुवात गरिन हिन्द राष्ट्र निर्माणको अभियान…(फोटो फिचर)
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्रकी अभिनेत्री रेखा थापा हिन्दु राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जुटेकी छिन् । चलचित्रबाट राजनीतिमा,...
काठमाडौँ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शनिवार ठमेलको नाइट क्लब पुगेर सबैलाई सर्प्राइज दिएका छन् ।...
सरकार ढालिदिने कांग्रेस सभापति देउवाकाे चेतावनी
काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहे सरकार ढालिदिने चेतावनी...
2019-05-09 admin 0
अध्यक्ष प्रचण्ड संग यसरी भएको थियो सिता दाहाल को बिहे हेर्नुहोस
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड संग यसरी भएको थियो सिता दाहाल को बिहे : काठमान्डू : आज बैसाख...
2019-03-08 admin 0
प्रधानमन्त्रि को विप्लप लाइ चेतावनी लुटेरा समूह नाम राख नेकपा को बर्को फ्याँक
काठमान्डू फागुन २४ गते शुक्रबार : आज भएको राजीतिक सहमति घोषडा कार्यक्रम मा बोल्दै प्रधानमन्त्रि के...
यस्ता छन् रक्षा श्रेष्ठका श्रीमान्, सानैमा भयो विवाह, रक्षाले खोलीन् सबै कुरा…(भिडियो सहित)
काठमाडौँ ।पछिल्लो समय हास्य टेलिश्रृखला ‘सक्किगोनी ‘ नेपालको निकै चर्चित कमेडी सिरियल हो । त्यसै हास्य...
नेपाल भारत सीमास्तम्भमामा पुगेर कलाकार कुमार कट्टेलले भने, ‘मातृभूमिको सुरक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो’
काठमाडौँ। नेपाली सीमा अति’क्र’मण गरी भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा बनाएपछि अहिले देशभर यसको विरो’ध भइरहेको छ...
अभिनेत्री आँचल शर्माको विवाह फागुनमा पक्का पक्की !
काठमाडौँ । चर्चित मोडल तथा नायिका आँचल शर्माको विवाहको कुरा लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेकी छिन्...
Copyright © 2018 Sajhasanjal.com All rights reserved